UFO Sightings: Ebe kachasị mma iji jide ihe na -efe efe na -amaghị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » UFO Sightings: Ebe kachasị mma iji jide ihe na -efe efe na -amaghị
Akụkọ na -agbasa Australia • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na Chile • Akụkọ na -agbasa ozi China • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ihe nlele UFO
Ikekwe inwekwu oge n'ụlọ n'ihi COVID-19 enyela anyị oge ka ukwuu ilegide anya na mbara igwe wee hụ… UFO. Ka ọ bụ na enwere ọtụtụ ihe nlele UFO karịa na mbụ?
Dabere na military.com, enwere ihe karịrị 1,000 ịhụ UFO na 2020 (ihe dị ka 7,200 n'ime ha) karịa na 2019.
Ekwentị nwere kamera wuru n'ime ya emeela ka ọ dị mfe ijide ihe amaghị na mbara igwe? Foto ndị ahụ ekwesịghị ịdị mma ikpe site na foto niile gara aga.
Ị ga -ama ụma gaa ebe ama ama UFO ma ọ bụ ị ga -eme ihe megidere ya wee nọrọ ebe ahụ?
Enwere ihe ole na ole na -enwe mmasị na Ihe Flying Unidentified, na njem gaa ebe amara maka ịhụ bụ ezumike emere ịtụ. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na -atụ anya ya mmechi nke ụdị nke atọ, ndị a bụ ụfọdụ ebe a ga -etinye gị na ndepụta dinta UFO.
Mpaghara 51, Nevada
Site na nchepụta echiche ọhụrụ na ihe omume Facebook na -agba ndị mmadụ ume ka ha banye na ntọala, Mpaghara 51 na -adị na akụkọ mgbe niile. Ntinye ndị agha US, nke dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita 160 n'akụkụ ugwu Las Vegas, bụ ebe ndị na -echekarị izu nzuzo. Echiche na ọbụnadị akwụkwọ nke ndị nyocha na ndị na -enyocha gọọmentị na -ekwu na mpaghara ahụ bụ ebe nchekwa nke ụgbọ elu ndị mba ofesi dara gụnyere ndị bi na ya, ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ, yana ihe ndị enwetara na Roswell. Ọbụna ụfọdụ kwenyere na a na -eji mpaghara ahụ arụpụta ụgbọ elu dabere na teknụzụ ndị ọbịa gbakere. Ụfọdụ ndị UFOlogists na -ekwu na ụlọ ọrụ nzuzo nzuzo ọhụrụ achọpụtara na ntọala nke Ugwu Papoose dị na Nevada bụ ebe a na -ezobe ihe ndị ọzọ na -anọghị na mpaghara 51. Ma ọ nwere ndị ọbịa n'ezie ma ọ bụ na ọ nweghị arụmụka, mana mpaghara a dị oke egwu. nkewa. Ndị ọbịa nwere ike gbaa okporo ụzọ steeti ahụ ebe a nwere akara "Extraterrestrial Highway." O juputara na azụmaahịa nke ndị ọbịa n'akụkụ ụzọ ọzara. Cheta ile anya n'elu ma ọ bụrụ na ị nọ ebe a n'abalị. O nwere ike ịbụ ụbọchị ihu ọma gị, ma ọ bụ abalị abalị.
Ụgbọ nne nke ebe UFO niile na -aga, ebe a bụ ihe ama ama maka ihe mberede Roswell nke mere na July 1947. O doro anya na ndị agha US kwupụtara na ọ nwetaghachila oghere dị n'ọzara dị nso (mgbe e mesịrị, ha kwuru na ọ bụ naanị balloon ihu igwe). ). Kemgbe ahụ, ndị na -akpa nkata na -ekwu na foduru nke saucer na -efe efe, na ọbụna ndị ọbịa nwụrụ anwụ, ka edobere na nchekwa ebe a. Mpaghara ahụ bụ ụlọ Roswell Spacewalk na International UFO Museum na Research Center yana Roswell Museum & Arts Center, ndị na -anụ ọkụ n'obi juputere. Ịchọta UFO n'ezie ebe a nwere ike isi ike, mana gafee obodo maka ememme Roswell UFO nke a na -eme na ngwụcha izu anọ ọ bụla nke ọnwa Julaị iji soro ndị na -eso ụzọ ibe ha na -eme mmemme ihe ndị ọzọ. Puku kwuru puku ndị na-eyi uwe na-ezukọ ebe a maka Comic-Con nke ndị na-efe UFO, nke gụnyere nkuzi na ngagharị ndị ọbịa.
Ogige Ugwu Joshua Tree, California
Osisi Joshua nke dị n'okporo ụzọ awara awara 29 mara na ọ nwere ọtụtụ ụzọ mmiri dị n'okpuru ala nke nwere ọdịnaya ịnweta na -enweghị ihe kpatara ya. Ogige National Park bụbu ebe ogbunigwe 300 dị n'ọzara ya nke ukwuu, gụnyere ugwu quartz ọcha kristal n'azụ Giant Rock. Ekwenyere na ọ bụ ntọala ala ọzọ site na ụfọdụ ndị nyocha. Ndị na -eso UFO na -enyocha ọzara ebe a kwenyere na Joshua Osisi na -anọdụ na 33rd North dị ka Roswell na -eme. N'ihi ya, ọ nwere ike ịbụ a hotspot maka nlele UFO. Ruo ọtụtụ afọ, ndị na -eme nchọpụta UFO agbakọwo ebe a maka ngwụcha ngwụcha ngwụcha nke nkuzi na ọmụmụ ihe na -akọwaghị. Echere Woodstock nke UFOlogy, ngwụsị izu na -eme ka a ghọta ihe niile na -akọwaghị na sayensị UFO na ndị ọbịa oge ochie sitere na mmalite mmadụ na mkpughe gọọmentị.
Telescope Aperture Spherical Spherical (FAST) dị narị ise na narị ise bụ igwe teliskop redio kachasị nwee mmetụta na ụwa. N'ịbụ nke dị n'ime ime mpaghara Guizhou nke China, Telescope FAST Radio, nke hụrụ ìhè mbụ na 2016, ndị nyocha China kwenyere na ọ bụ nhọrọ kacha mma nke mmadụ iji mebie ozi sitere na mbara ikuku. Aha otutu Tianyan, nke pụtara "Anya nke Eluigwe" ma ọ bụ "Anya nke Eluigwe," site n'aka ndị guzobere ya, achọpụtara ya ka ọ dozie ụfọdụ ihe omimi kacha ukwuu na mbara igwe. Otu n'ime ọrụ izizi ya bụ ịchọpụta akara nkwukọrịta sitere na ndị ọbịa. Gaa na nnukwu ihe ịtụnanya sayensị a wee nweta ohere ilele ndị ọkà mmụta sayensị na-arụ ọrụ na ụfọdụ ezigbo ọrụ metụtara ala.
Wycliffe Ọfọn, Australia
Wycliffe Nke dị n'akụkụ okporo ụzọ Stuart na Northern Territory nke mba a maara dị ka isi obodo UFO nke Australia. UFO na-ahụkarị ndị obodo ebe a nke ukwuu na mpaghara ahụ na-enye njikọ zuru oke nke ndị ọbịa na Wycliffe Well Holiday Park. Ọ bụ otu n'ime ebe ise kacha hụ n'anya nke ndị ọbịa n'ụwa ebe ndị njem nwere ike ịbanye iji lelee mbugharị UFO, na -abụkarị n'oge mbido ọkọchị site na Mee ruo Ọktọba. Akụkọ banyere ihe na -efe efe nke a na -amaghị ama malitere ịgbapụta na mpaghara a kemgbe ụbọchị Agha IIwa nke Abụọ. Ndị ọbịa na -abịa ebe a nwere ike ijide teliskop ha wee nọrọ n'ime ụlọ na Wycliffe Well Holiday Park. Ndị obodo na -ekwu na ha na -ahụ ihe dị iche iche ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla n'oge "oge UFO."
A na -ahụta obodo San Clemente ka ọ bụrụ isi obodo UFO nke ụwa. Dabere na ndị nyocha na -arụ ọrụ ebe a, nlele UFO na -adịkarị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu izu. Enwere ọtụtụ nlegharị anya nke ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Chile hiwere ụzọ UFO nke dị kilomita 30 n'ogologo afọ 2008. Ụzọ ahụ na-ewe ndị njem site n'ugwu Andes mara mma nke na-ekpuchi saịtị dị iche iche ebe akọpụtala mmekọrịta dị nso. Mpaghara a bụ ọdọ mmiri Colbún nke nwere ọdịnaya ịnweta mineral dị ka o doro anya na -enweghị isi ọ bụla (ọ maara nke ọma?). Ihe a na -ahụ anya nke ụzọ ahụ bụ El Enladrillado, nnukwu mpaghara dị larịị nke 200 kpụkọtara ọnụ nke mgbawa ugwu nke ekwenyere na mmepeanya oge ochie tọrọ ya. Ndị na -ahụ maka izu nzuzo na ndị nyocha, kwenyere na ọ bụ ebe ọdịda maka ndị mba ọzọ.
JOHN DEEGAN ekwu, sị:
October 21, 2021 na 10: 38
Mụ na otu onye ọrụ ibe m hụrụ ka otu UFO nọ na-efegharị n'elu ụlọ ọrụ kemịkal dị na Manchester n'elekere 5.50 nke ụtụtụ otu ụtụtụ July na 1999, a ga m arụ ọrụ na Traford Park na igwe igwe m mgbe m nụrụ ụda nke osisi kemịkal dị nso na-agbapụ. , Mgbe m si n'okporo ụzọ legharịa anya, ọrụ a na-efegharị n'elu ọkpọkọ kemịkalụ, otu onye ọrụ ibe m na-agbakwa ígwè na-arụ ọrụ ngwa ngwa sonyeere m. Ọ dị nnọọ jụụ n'oge ahụ, naanị ụzụ bụ nke onye na-agba ọsọ, ọ dịghị mkpọtụ si n'aka ọrụ ahụ, ọ dị ka a ga-asị na ha kwụsịrị n'etiti ikuku ma tinye breeki aka. Ọ bụghị nke ụwa a, o mere ka anyị abụọ nọrọ ọdụ maka ọrụ elekere isii nke ụtụtụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ebe m nọ n'oge ahụ, n'ihi ya, m ghọrọ onye kwere ekwe na ndị ọzọ na-eleta anyị, agara m okwu na 6 banyere Suffolk UFO nyere site Col. Charles Holt mbụ osote isi ọchịagha nke Usa agha owuwu n'ebe ahụ na-ekiri a ole na ole mmemme na isiokwu mbụ. Ọ bụ naanị dị ka onye kwere ekwe katolik nke Ndị Kraịst na February 1994 ahụrụ m eziokwu ahụ bụ́ na Jizọs na Meri na ụfọdụ n’ime ndị nsọ pụtara ìhè n’ihu Veronica ọhụụ na Bayside USA (2016-1970) tinyere ihe ndị ọzọ ha gwara ya banyere ihe ga-emenụ. N’ikpeazụ oge anyị na-ebi ugbu a bụ na ọ bụ Setan na ndị otu ya bụ ndị na-efegharị ụdị ọrụ a dị iche iche gburugburu ụwa iji ghọgbuo ihe a kpọrọ mmadụ ka ha kwenye na agbụrụ ndị mba ọzọ na-adịghị adị na-eleta anyị. Mgbe owuwe Ndị Kraịst nke m kwenyere na ọ ga-abụ oge afọ iri a, ụlọ ọrụ mgbasa ozi ga-akọ ndị a hapụrụ na ntọhapụ nke ndị mba ọzọ emeela iji kpuchie ihe omume Chineke (akụkọ adịgboroja karịa), nke a ga-ekwupụta na afọ 94. Oge mkpagbu ya bụ, mgbe Jizọs tọhapụrụ ndị na-agba ịnyịnya anọ ahụ, agha ga-amalite site n'aka ndị agha jikọtara ọnụ nke Russia/China & New York na-akụ ihe ọchị, maka ihe ndị ọzọ na nke a gaa na ebe nrụọrụ weebụ nke ụlọ nsọ. http://www.tldm.org ma lelee n'okpuru ntuziaka maka isiokwu ahụ. Ihe ngosi ha na Bayside bụ ọtụtụ ọrụ ebube ndị a rụrụ n'ebe ahụ bụ eziokwu, n'agbanyeghị na chọọchị agaghị amata ya n'ihu ọha, ha kwuru n'ebe ahụ na Setan abanyela n'ụka ugbu a n'ọkwa kachasị elu dịka akụkụ nke agha ime mmụọ na-aga n'ihu, popu ikpeazụ bụ eziokwu bụ. Benedict.
Mgbe ihe ngosi UFO & Consciousness bịara Manchester na 2017 ọ mere n'ofe okporo ụzọ site na ebe m gbara akaebe UFO na 1999, nyere njem okwukwe nke m, ekwetaghị m na nke a bụ ihe ndaba. Ha na-akwalite echiche ahụ na ihe ngosi ahụ na ndị agbụrụ ndị mba ọzọ na-eleta anyị na ụfọdụ n'ime echiche nzuzo ndị gbara ya gburugburu. Enwere ma nweela ọtụtụ akwụkwọ akụkọ na igwe onyonyo a gbasara isiokwu a na-akwalitekwa echiche a.
Enwere m akwụkwọ ozi nke e bipụtara n'akwụkwọ akụkọ ụwa gbasara isiokwu a na 2018 n'ememme nke Assumption of the Holy Virgin Mary.
Ya mere, nke ahụ ka akọwara ihe omimi m, Setan na ndị otu ya bụ ihe karịrị nke mmadụ, ya mere Akwụkwọ Nsọ ji gwa anyị na anyị emegideghị anụ ahụ na ọbara nkịtị kama ike na ndị isi. Ọ bụ ya mere Onye Kraịst ji enwe ekpere / ibu ọnụ wdg n'ime ihe agha ime mmụọ ha, nke dị irè megide ọrụ ya.